Mutoro weKambani - MH Thread - Ningbo MH Thread Co, Ltd.
MH yakagamuchirwa naOeko-Tex®Standard100 uye yakakudzwa se "Top 500 China Service Industry" uye "AAA Trustworthy Company".
Kunetseka nezvekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza
Nekukura kweChinese uye hupfumi hwepasi pose, nzvimbo yechisikigo iri kuwedzerawo. Kunyanya mweya, mvura, uye kuchena kwepanyika zvakanyanya kuoma. MH inotora mutoro wayo yekudzivirira nzvimbo yakasikwa.
Muna 2015, MH yakatanga "mavara matsvuku" basa rekuchengetedza zvakatipoteredza, kushevedza vashandi veMh kuchengetedza zvisikwa zvipenyu uye vanoita pfungwa ye "green footprint" mumabasa ekunze.
Sezvo inozivikanwa nenguvo yezvigadzirwa zvemabhizimisi, MH yave ichiita zvigadzirwa zvemavara kweZ16 makore, uye yakatsvakurudza kutsvakurudza nzira yekuderedza kushandiswa kwekugadzirwa kwemhepo inosvibisa, yakashandirwa kuvaka maharareji ekurapa maharareji, kuisa pachena kuti firati yemvura yakasvibiswa uye inosungira zvose inosangana nemagariro ezvakatipoteredza . MuChNUMX MH zvakare yakatanga kupisa dope, kushandiswa kwepolyester, cationic yakagadziriswa polyester, uye Better-Cotton-Initiative mavara mana emagetsi ezvisikwa zvezvinhu zvakasikwa, kubva pazvinhu zvakagadzirwa kuti vashandise kugadzirwa kwemavara.
Charity uye basa revanhu
MH akamisa "Xiao dou ya" Scholarship Fund kubatsira vana vari mumusha wakashata kuti vapedze kudzidza kwavo. MH akabhadhara vana vane hurombo hweHNUMX kwemakore gumi.
Zvose zhizha, Mh vanozvipira vanotumira chipo chinotonhorera kune vashandi vehutsanana uye mapurisa emapurisa.MH inotsigira "zvipfeko zvekupfeka" basa uye yakapa pamusoro pe10,000pcs zvipfeko kune varombo musha muGuizhou, Yunnan nedzimwe nzvimbo dzine urombo.
Gore roga roga, VH vanozvipira vachashanyira vana muNibo Enmeier vana vekuchengetedza vana, vachitamba nevana, uye vachivapa zvipo.
MH Core Values: Customer Focus, Teamwork, Innovation, Passion, Kuvimbika
MH yakagadzira "MH Weekly" pepanhau reElectric, MH APP nemamwe mapurisa ekukurukurirana kuti aparidze tsika dzeMh.
MH ine mari yakakosha yekutsigira mabasa emitambo, yakadai segore repore, basa rekuvaka kwechikwata, kushanya kwevashandi, nezvimwe. vashandi kuti vave netsika dzakanaka.
Kutarisira utano hwevashandi
MH ine mari inokosha yehutano hwevashandi. MH ine kuongorora kwegore negore kune vashandi vose veMH, kuronga hurukuro dzehutano, kupayona mararamiro ane hutano uye ruzivo rwekuchengetedza utano. Kunze kwekuti, MH akagadzira mushandi we "Firefly" mutual fund, kubatsira vashandi veMH vane chirwere chikuru kana nhamo. "Firefly" mutual fund yakabatsira vanopfuura gumi vashandi mumakore ekupedzisira e2.